प्रकाशित: मंगलबार, पुस २८, २०७७, ०९:०१:०० नेपाल समय
काठमाडौं– क्रिसमसको माहोल थियो। क्रिसमस र नयाँ वर्षको रौनकसँगै खेल निकै कम हुँदै थिए। डिसेम्बर २४, अर्थात् क्रिसमसको एक दिन अघिबाटै फ्रेन्च लिग वानका खेल तालिका जनवरी ६ सम्मका थिएनन्।
नयाँ वर्ष र क्रिसमसको रौनकमा यूरोपियन फुटबलको माहोल समेत एकाएक तात्यो। त्यसो हुनुका कारण थिए– थोमस टुचेल। पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)का प्रशिक्षकलाई कतारी मालिकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका थिए।
चालू सिजनमा पीएसजीको प्रदर्शन एकनासको थिएन। तर, अवस्था त्यस्तो खराब पनि त थिएन। तर, किन हो पिएसजीका कतारी मालिक नासिर अल खेलाइफीले टुचेललाई रुचाएनन्। र त ट्रासबर्गविरुद्धको खेलमा ४–० को जित निकालेको भोलिपल्ट ४७ बर्षिय जर्मन प्रशिक्षकले जागिरबाट हात धुनुपर्‍यो।
यूरोप क्रिसमस र नयाँ वर्षको उल्लासमा झुमेका बेला टुचेलका लागि त यो सुखद् रहेन नै। पीएसजीका समर्थकका लागि समेत यो शुभ समाचार थिएन। र त उनीहरुले शंका गरिहाले– पछिल्लो सिजनमा घरेलु लिग, कप जिताएका र क्लबको इतिहासमै पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग फाइनलसम्म पु¥याएका प्रशिक्षकलाई हठात् किन हटाइयो ?
चालू सिजनकै च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा पीएसजी अन्तिम १६ प्रवेश गर्ने–नगर्ने धरमरकै अवस्था थियो। तर, त्यो द्विविधा अन्तिम खेलसम्म आइपुग्दा रहेन। टुचेल नेतृत्वको टोली अन्तिम १६ मा पुग्यो। र प्रतिद्वन्दी पायो क्याटलान क्लब बार्सिलोना। पीएसजी र बार्सिलोनाको भिडन्त बहुप्रतिक्षित खेल समेत हो।
सन् २०१७ मा घरेलु मैदानमा ४–० को अग्रता बार्सिलोनाको मैदान क्याम्प नाउमा जोगाउन नसक्दा ६–५ को पराजय भोगेर च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरिनु परेको पीडा पीएसजीका समर्थकले सायदै भुलेका होलान्। अहिल बदला लिने अवसर समेत पीएसजीसामु छ।
फेब्रुअरी १७ मा च्याम्पियन्स लिगमा पीएसजीले बार्सिलोनासँग खेल्नु छ। पीएसजीको एउटा सपना पनि त छ– पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग जित्ने र क्लब विश्वकप खेल्ने। क्लबमा ठूलो लगानी र ५० वर्षको इतिहास बोकेको क्लबले राखेको यो महत्वाकांक्षा अस्वभाविक पनि होइन।
यस्तोमा धेरैले सोचेका थिएनन् कि टुचेल बर्खास्त हुनेछन्। अघिल्लो सिजनको फाइनलसम्म पुगेको अनुभव उनले चालू सिजनमा लगाउनेछन् र क्लबलाई ऐतिहासिक ट्रफी दिलाउनेछन्। तर, उनको नियति भनौं वा क्लबको नीति जे होस् टुचेल अप्रत्यासित रुपमा बर्खास्तीमा परे।
मिडिया रिपोर्टहरुलाई मान्ने हो भने टुचेलको बर्खास्तीको मूल कारण खेल निर्देशक लियोनार्दोसँगको बेमेल हो। यही बेमेलले टुचेलबारे पीएसजीले गम्भीर निर्णय लिएको अंग्रेजी पत्रिका डेली मेलले दावी गरेको छ। पीएसजीका अध्यक्ष खिलाफीको एक मात्रै उद्देश्य हो–च्याम्पियन्स लिग ट्रफी।
त्यसका लागि उनले पैसाको खोलो नै बगाएका छन्। नेयमार, एमबाप्पे, इकार्डी जस्ता स्टार फुटबलर भित्र्याएका छन्। तर टुचेलले २ सिजनमा च्याम्पियन्स लिगको ट्रफी दिलाउन सकेनन्। भलै यो सिजन उनका लागि मौका थियो।
तर, कारण यति मात्रै मान्न सकिन्नँ। टुचेलको बर्खास्तीको कारण यो मात्रै हो भनेर मान्न सकिन्नँ। किनभने पीएसजीले उनको बर्खास्तीबारे हल्ला गर्न चाहेन। यतिसम्म कि उसले सामाजिक सञ्जाल र आफ्नै साइटमा पनि प्रशिक्षकबारे सूचना टाँस गरेन। तर, उनी क्लबबाट बर्खास्त भइसकेको समाचार आइरहे।
उनी बाहिरिएपछि पीएसजीलाई युरोपियन च्याम्पियन बनाउने क्षमता भएको प्रशिक्षक को होलान् ? बर्खास्तीपछि नेयमार र केलियन एम्बाप्पेका समर्थकले भरिएका फेसबुक ग्रुपहरु यस्तै प्रश्नले भरिए।
यही बहसमा धेरैको उत्तर थियो– माउरिसियो पोचेटिनो। पोचेटिनो खेल रणनीतिका माहीर प्रशिक्षक हुन्। पोचेतिनो पीएसजीको प्रशिक्षक बन्ने, टुचेललाई हटाउँदै पाचेटिनो, पीएसजीमा पोचेटिनोको सम्झौता– यस्तै हेडलाइन छाइरहे। नभन्दै पीएसजीले पोचेटिनोलाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्‍यो। पीएसजीसँग पोचेटिनोको सम्बन्ध जस्तो रहला, च्याम्पियन्स लिग जिताउलान् वा पीएसजीको सपना अधुरै रहला ? यो समयले बताउनेछ।
तर, पीएसजीबाट टुचेलको बहिर्गमन भने जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डको बहिर्गमन भन्दा फरक भएन।
उनले फ्रेन्च लिग वानका २ टाइटल, घरेलु लिगका ट्रफी जितेर पीएसजीमा साढे दुई वर्ष बिताए। सँगै पीएसजीलाई च्यम्पियन्स लिग फाइनलमा पुर्‍याउनु पनि उनको सफलता हो। तर चालू सिजनमा घरेलु लिगमा उनको टोलीले उत्कृष्ट सुरुवात गर्न सकेन। टोलीका मुख्य खेलाडी नेयमार र एम्बाप्पे कोरोना संक्रमणका कारण मैदानबाहिर बसे। नेयमारले त केही खेलमा प्रतिबन्धसमेत भोगे।
यस्तै प्रतिकूलताका बाबजुद पीएसजी अंक तालिकाको तेस्रो स्थानमा थियो। शीर्षस्थानको लियोन लिल्लसँग एक अंकले पछि थियो। जहाँ पीएसजीको पुनारागमनमा शंका थिएन।
उनको प्रशिक्षणको अन्तिम खेलमा नै हो, क्लबले स्ट्रासबर्गविरुद्ध ४–० गोलको जित निकालेको। र, फराकिलो जितको उत्सव मनाइरहेका समर्थकले अविश्वसनिय समाचार सुनेको। उनको नियति भन्दा फरक नपर्ला– बोरुसिया डर्टमन्डसँग उनको ब्रेकअप हुँदा पनि अवस्था ठ्याक्कै यस्तै थियो।
केही इंग्लिस पत्रिकाका अनुसार अहिले उनी प्रिमियर क्लब आर्सनल र चेल्सीसँग जोडिने सम्भावना देखिएको छ।
पीएसजीले च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा हार बेहोरेपछि प्रिमियर क्लबको उनीप्रतिको दृष्टिकोणमा बदलाव आएको छ। बीबीसीका फुटबल पत्रकार जोन बेन्नेटका अनुसार मैदान र मैदानबाहिर नै टुचेल समस्यामा छन्।
समर ट्रान्सफर विन्डोको अन्तिममा नयाँ भर्तीबारे टुचेल र खेल निर्देशक लियोनार्दोबीच बेमेल पैदा भएको कुरा बाहिरिएको थियो।
यस सन्दर्भलाई लिएर टुचेलले पहिलो सिजनमा निर्देशकले खेल प्रशिक्षक कम र नेता–खेलकुद मन्त्रीको जस्तो भूमिका बढि निर्वाह गरेको महशुस गरेको जर्मन टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा बताएका थिए।
तर उनले यो कुरामा गलत तरिकाले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको दाबी गरे र भने, ‘सायद समाचार गलत तरिकाले अनुवाद गरिएको थियो।’ तर उनले क्लबमा असर परेको भने स्विकार गरेका छन्।
पीएसजीका खेलाडीसँग उनको सम्बन्ध राम्रो देखिएको छ। तर क्लबसँग उनको अन्य सम्बन्ध भने उति सहज देखिँदैन।
उनको यस्तो गतिविधिको कुरा गरिरहँदा हामीले बोरुसिया डर्टमन्डका अध्यक्ष हान्स जोआचिमले भनेको कुरा विर्सनु हुँदैन। उनले भनेका थिए, ‘टुचेल अप्ठ्यारो स्वभावका मानिस हुन् तर फेन्टास्टिक प्रशिक्षक हुन्।’
तर जसरी पीएसजी पहिलो अन्य क्लबहरुलाई पाखा लगाएर लिग लिडर बन्थ्यो, यो सिजनमा त्यो देख्न पाइएको छैन। यता, आरबी लाइप्जिक र म्यानचेस्टर युनाइटेडपिरुद्ध कडा प्रतिस्पर्धा गर्दै च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा समूह विजेता बनेको थियो।
पीएसजीबाट बाहिरिए पनि उनी माग हुने प्रशिक्षकमध्ये पर्छन्। त्यसैले उनी प्रिमियर लिगमा जम्न नसक्लान भन्न सकिन्न्।
बोरुसिया डर्टमन्डमा हुँदा उनले क्लबलाई एउटा ठूलो उपहार दिए। उनले दुई सिजनमा केहिल्यै घरेलु समर्थकलाई निरास बनाएनन्। उनको रणनीतिमा जतिपटक घरेलु मैदानमा खेल भयो उतिपटक नै डर्टमन्ड विजयी भयो।
लगातार जित निकालिरहेको बायर्न म्युनिखलाई पनि उनको रणनीतिले हरायो।
त्यस्तै उनले जर्मन कपको उपाधि पनि दिलाए। जसै टोली विजेता बन्यो क्लबले उनलाई सजाय दियो। उपाधी जितेको तीन दिनपछि उनी बर्खास्त भए।
तर उतिबेला डर्टमन्ड बुन्डेस लिगाको अंकतालिकामा भने तेस्रो नम्बरमा थियो। संयोग कस्तो भने पीएसजीबाट उनको बहिर्गमन हुँदा पनि क्लब घरेलु लिगको तेस्रो नम्बरमै थियो। उनी बर्खास्त हुँदा गोल डटकमले टुचेलको बर्खास्तीको कारण चाहिँ प्रशिक्षण क्षमताको आधारमा कम र ड्रेसिङ रुमको व्यवहार बढी रहेको बताएको थियो।
क्लबका अनुसार उतिबेला प्रशिक्षक र डर्टमन्डका खेलाडीको सम्बन्ध यति बिग्रिएको थियो कि टुचेल काम गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। क्लबका तत्कालिन कप्तान मार्सेल स्मलचर र फरवार्ड मार्कस रिउस पनि उनीबाट रुष्ट भएका थिए। तर युरोपमा छापिने कतिपय विश्वप्रसिद्ध पत्रिकाले क्लबसँगको खराब सम्बन्धका कारण उनी बर्खास्त भएको टिप्पणी गरेका थिए।
उनको बर्खास्तीको कारण जे होस्, तर राम्रो राणनीतिकार टुचेल उपाधि जित्दाजित्दै बर्खास्त हुने गरेका छन्। त्यो पनि नियतिले डर्टमन्ड र पीएसजीमा अंकतालिकामा तेस्रो स्थानमा रहँदा नै टुचेल बर्खास्त हुनुपरेको छ।
महिला लिग : चौदण्डीगढीको पोस्टमा पुलिसको गोलवर्षा
टोकियो ओलम्पिकबारे जापान सरकारका ३ विकल्प
मिनाशको सानदार प्रदर्शनमा प्रदेश १ को सान्त्वना जित
पीएम कपमा कर्णालीलाई प्रदेश १ को बलियो लक्ष्य
पीएम कप : बागमतीलाई प्रदेश २ ले दियो १८० रनको सामान्य लक्ष्य
वाटमोरले देखेको सपना